Iindawo ezinika umdla To The Black Forest Germany | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Iindawo ezinika umdla To The Black Forest Germany
Kwabo alazi sele, Ihlathi elimnyama yindawo enkulu enamahlathi kumazantsi mpuma eJamani. ngaphezu, its ise kwiphondo Baden-Württemberg kwaye ithatha ingxenye enkulu kuyo.
Ngaphezu, kummandla ekumda nge Fransi yaye Swizalend, ngoko ke kwi mazwe ngokunjalo.
Kweli nqaku, siza kuthetha banzi kutheni kuluncedo utyelelo. okubaluleke kakhulu, siza kukuxelela indlela ukufikelela iBlack Forest eJamani ngololiwe.
Ubuhle of kwiNgingqi
Ubuhle kummandla ilele ubume bayo, kodwa ezinye kwiidolophu ebukekayo nemizana. Ke ukuba inxenye uhlobo, le ndawo, kuhle, zizaliswe ngamahlathi. Loo ndawo ke self-explanatory. kunjalo, kukho okungakumbi!
The Black Forest, okanye Schwarzwald njengoko ibizwa ngokuba ngu-in German, na kwiindawo ezininzi imibono amahle engezansi. Kuba kananjalo lomfula emangalisa ezigodini libalele, iincopho gorgeous kwezininzi iinduli onokuyifumana apha.
Ngaphezu, kukho inala yezindawo ukuba unokuba nomdla kubantu abaninzi. Ungayifumana usapho ezolileyo oya kuyo, kwiimfanta ezimbalwa, kunye eyoyikekayo landscapes ukuba ngaphezulu abantu entsha.
Yintoni egqithisile, uya kufumana wonke loo mmandla langa kunye fairytale-like unyaka wonke! Oko kuyinyaniso kuba kubonakala umxhelo xa sele sunny, lwemvula, yaye xa kukho ikhephu ukuba. Ungayibona ngokucacileyo kwi ezininzi imifanekiso yendawo.
Indlela Yokufikelela Black Forest ngololiwe
Ukufikelela iBlack Forest ngu Train yinto onokuyenza ngeendlela ezininzi. Oko ikakhulu ngenxa indawo yommandla kunye nento yokuba ukuqeqesha uhambo nge Germany kungummangaliso.
kunjalo, loo nto bonke. Unga ukufikelela kwiindawo ezininzi kummandla ukusuka phantse nayiphi na inxalenye Europe. Loo nto nangakumbi imizi emikhulu kumazwe afana France, Swizalend, Ostriya , Bheljiyam, ElamaTaliyane, kunye nezinye ezininzi.
Ke Germany, umdla uloliwe kwenziwa lula njengokuba inkampani - Deutsche Bahn isebenza kuyo. Ezahlukeneyo Oololiwe be-ICE, EuroCity, CityNight, amabanga, yaye imigca TGV angakusa kwiindawo ezininzi kummandla. Unakho ukukhwela uloliwe ku Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, no Offenburg. Ezi oololiwe baye kuzo zonke iidolophu ezinkulu German, ukuze ukuhambela iBlack Forest ngololiwe iya kuba yomoya.
Loo nto wena ucinga ukuba wenze, akuyi kuhamba okubi, ngokuba ngokundwendwela i Black Forest ingaba imilingo amava. Sithi oku ikakhulu ngenxa ungasebenzisa i uloliwe bemvelo kwaye behla kummandla lonke. Uya kubona izinto ezininzi ezintle i Forest Black kufuneka anikele. I-Black Forest umgca ezibukekayo isebenza kwindlela Offenburg-Konstanz.
Tyelela i-Black Forest ngololiwe nini ufuna!
Njengokuba ubona, ubuhle mmandla kunye lula umdla kaloliwe ukwenza olu hambo yinto emangalisayo. We kakhulu Ndikucebisa ukuba batyelele le ndawo omlingo yaseJamani ubuncinane kanye ebomini bakho! kunjalo, ukuba hambo kufuneka elide ngokwaneleyo ukuba abone yonke into Forest Black kufuneka anikele!
Xa ukhetha ukuthatha nathi kule sipho, uzive ukhululekile ukuba Qhagamshelana Gcina A Isitimela. Sinokubanceda ukuba utyelele i-Black Forest ngololiwe bafumane amava ekhumbulekayo ngokwenene.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fblack-forest-by-train%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml kwaye bangatshintsha / ru ukuba / ja okanye / kunye ngeelwimi ezingaphezu.
#blackforest #blackforestgermany oololiwe tips uloliwe train Travel uhambo ngololiwe